Mudane,Jawar Mohammed oo ku eedeeyay Dr.Abiy Ahmed Kaligii Talisnimo. – Xeernews24
Mudane,Jawar Mohammed oo ku eedeeyay Dr.Abiy Ahmed Kaligii Talisnimo.
26. Oktober 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Jawar Mohammed oo ah siyaasi caan ka ah dalka Ethiopia ayaa ku eedeeyay ra’iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed inuu yahay kaligii taliye dib ugu celinaya dalka Ethiopia xilliyadii hore.
Siyaasigan ayaa sheegay in uu kula tartami doono doorashada ka dhacaysa dalka Ethiopia sannadka soo socoda Abiy Ahmed.
Jawar oo weriyaasha kula hadlay guriga uu ka degen yahay magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay qorsheeyeen in ay weerar ku soo qaadaan taasna ay sababtay banaanbaxyo ka dhacay caasimada Addis Ababa iyo gobolka Oromia Arbacadii iyo Khamiistii aynu ka soo gudubnay.
Hase yeeshee ciidamada amniga dalka Ethiopia ayaa beeniyay warkaas, waxayna hay’ada xuquuqda aadanaha sheegtay in ay banaanbaxyada ku dhinteen illaa 16 ruux.
Taliyaha Booliska Oromia ayaa sheegay in banaanbaxyada loogaga soo horjeeday ra’iisul wasaare Abiy Ahmed ay ku dhinteen illaa 62 ruux oo rayid ah iyo shan boolis ah.
“Abiy waxaa ka muuqda calaamadaha hore ee kaligii taliyanimada waxana uu isku dayayaa inuu dadka cabsi geliyo xitaa kuwa ku dhowdhow ee ka caawiyay inuu talada dalka la wareego,aaminsana fikrado ka duwan kuwiisa.”ayuu yiri Jawar oo la hadlay wakaalada wararka ee AFP. “Cabsi gelintu waa bilowga xukun kaligii taliyanimo.”ayuu sii raaciyay.
Abiy Ahmed oo labo toddobaad kahor ku guuleystey abaalmarinta nabada ayaa talaadadii la soo dhaafay waxa uu sheegay sida uusan raali uga ahayn dadka leh warbaahinada oo arrimaha qowmiyadaha xoogga saara kana horimaanaya midnimada.
Warkan ayaa dad badan u qaateen inuu ula jeedo Jawar Mohammed oo leh warbaahin gaar ah waxayna keentay in Jawar Mohammed uu ku baaqo banaanbaxyo.
Hadaladan ayaa waxa ay u muuqdaan kuwii sii xoogeynaya khilaafka u dhexeeya ra’iisul wasaaraha iyo Jawar oo ah muwaadin Ethiopian ah oo haysta dhalashada dalka Maraykanka lehna warbaahinta Oromia Media Network.
Jawar oo ka soo jeeda qowmiyada Oromia ayaa abaabulay dhalinyaro ka soo horjeesatay xukuumadii Ethiopia intii u dhexeysay 2016 illaa iyo 2018 kuwaasoo dhigey banaanbaxyo aan kala go’ lahayn oo sababtay in uu xukunka la wareego Abiy Ahmed.
Taageerayaasha Jawar ayaa aaminsan in ballanqaadyadii Abiy ee ahaa dib u habeynta ay joogsatay uuna ra’iisul wasaaruhu bilaabay awood dhexe inuu ku maamulo dalka uuna aamusiyo mucaaradka siyaasiyiina xabsiga u taxaabay.
Hay’ada xuquuqda aadanaha ee Amnesty Interrnational ayaa sheegtay in tan iyo markii uu talada dalka Ethiopia la wareegay Abiy Ahmed dad badan la xirxirey gaar ahaan gobolka Oromia kuwaasoo la rumeysan yahay inay ka soo horjeesteen dowlada.
Si kasta ha ahaatee Jawar Mohammed oo iska dhalay aabe Muslim ah iyo hooyo masiixi ah sida Abiy Ahmed oo kale ayaa sheegay in haddii uu wadadiisii hore ku soo laabto Abiy Ahmed uu taageeri doono.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/10/Jawhar.jpg 960 720 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-26 00:32:462019-10-26 00:32:46Mudane,Jawar Mohammed oo ku eedeeyay Dr.Abiy Ahmed Kaligii Talisnimo.
Mucjiso lagu arkay Meydka Nin ku dhintay dagaalkii Iidaale ee Maxkamadaha Islaamiga... Itoobiya xaggay u socotaa? War iyo faallo kooban